Yintoni eyayingumFrentshi u-Indochina?
Imbali kunye neNkcubeko Southeast Asia
I-Indochina yesiFrentshi yayingumgama ohlangeneyo kwimimandla yaseFransi yenkcubeko ye-Asia-mpuma ye-Asia ukusuka kwikoloni ngo-1887 ukuya kwi-independence kunye neeVietnam zeVietnam eziphakathi kwe-1900. Ngethuba lenkcubeko ye-colonial, i-Indochina yesiFrentshi yenziwe yiCochin-China, Annam, eCambodia, Tonkin, Kwangchowan, naseLaos .
Namhlanje, ummandla omnye uhlukaniswe kwiintlanga zaseVietnam , eLaos, naseCambodia . Nangona imfazwe eninzi kunye neengxabano zomphakathi zonakalisa ezininzi zeembali zabo zakuqala, ezi ntlanga zihamba kakuhle kakhulu kuba umsebenzi wabo waseFransi waphela ngaphezu kweminyaka engama-70 edlulileyo.
Ukuxhatshazwa kwangaphambili kunye neColonization
Nangona ubudlelwane baseFransi neVietnam bebuqalisile ekuqaleni kwekhulu le-17 kunye neendwendwe zabavangeli basemazweni, amaFrentshi athatha amandla kuloo ndawo kwaye amisa umbutho obizwa ngokuba ngu-French Indochina ngo-1887.
Bakhetha indawo leyo ngokuthi "ikholoni yokuxhaphaza," okanye kwiinguqulelo zesiNgesi ezihloniphekileyo, "i-koloni yezoqoqosho." Iirhafu eziphezulu ekusebenziseni kwendawo efanelekileyo njengetyuwa, i-opium kunye nerayisi yotywala yazalisa i-coffers ye-French colonial government, kunye nezo zinto zintathu eziquka u-44% webhajethi kaRhulumente ngo-1920.
Ngobutyebi bendawo bendawo bephantse baphupha, amaFrentshi aqala ngowe-1930 ukuza kuhlalutya imithombo yendalo yendawo endaweni yoko. Yintoni ngoku iVietnam yaba ngumthombo ocebile we-zinc, i-tin, kunye namalahle kunye nezityalo zemali ezifana nerayisi, i-raber, ikhofi kunye neti. ICambodia yanikeza i-pepper, i-raber, kunye nelayisi; I-Laos, nangona kunjalo, yayingenayo imigodi eyigugu kwaye yayisetyenziselwa ukuvunwa kwamatye aphantsi.
Ukufumaneka kwezinto ezininzi eziphambili zeerubha ezikhokelela ekusekweni kweenkampani ezidumileyo zaseFransi ezifana neMir Michelin. IFransi yatshala imali kwimveliso yaseVietnam, izakhiwo zokwakha izitya, utywala kunye neengubo zokuthumela ngaphandle.
Ukuhlasela kweJapan Ngexesha leMfazwe Yehlabathi yesiBini
Ubukhosi baseJapan buhlasela i-Indochina yesiFrentshi ngowama-1941 kwaye urhulumente waseFransi uVichy uhanjiswe i-Indochina eJapan .
Ngethuba lokuhlala kwabo, amanye amagosa asejapan aseJapan akhuthaza ukunyuswa kobuzwe kunye nokuzimela kwezo ndawo. Nangona kunjalo, umkhosi wezempi kunye noorhulumente wasekhaya eTokyo uhlose ukugcina i-Indochina njengomthombo obalulekileyo wezinto ezifana ne-tin, amalahle, i-rubber kunye nelayisi.
Njengoko kuvela, esikhundleni sokukhulula ezi zizwe ezizimeleyo ngokukhawuleza, amaJapane endaweni yoko anqwenela ukuzongeza kwiindawo ezibizwa ngokuba yi-Greater East Asia Co-Prosperity Sphere.
Ngokukhawuleza kwabonakala kubemi abaninzi base-Indochinese kangangokuba amaJapan ayenenjongo yokubaxhaphaza kunye nomhlaba wabo njengenkohlakalo njengokuba isiFrentshi senzile. Oku kwavelisa ukudalwa kweqela elitsha lokulwa ne-guerrilla, i-League ye-Independence yaseVietnam okanye "iVang Nam Doc Lap Dong Minh Hoi" - ngokuqhelekileyo kuthiwa yiVi Vieth efutshane. I-Viet Minh yalwa nomsebenzi waseJapan, ukudibanisa abavukeli belizwe kunye neentlanga zengxowankulu.
Ukuphela kweMfazwe Yehlabathi II kunye ne-Indochinese Liberation
Xa iMfazwe Yehlabathi Yesibili iphelile, iFransi ilindele ukuba amanye amaPower Allied abuyele iikhompi zase-Indochinese, kodwa abantu base-Indochina babe neengcamango ezahlukeneyo.
Bekulindeleke ukuba banikezwe ukuzimela, kwaye lo mbono wezobangela ukukhokelela kwiMfazwe yokuqala yase-Indochina kunye neMfazwe yaseVietnam .
Ngowe-1954, iVietnam phantsi kweHo Chi Minh yanqoba iFransi kwi- Battle of Dien Bien Phu , kwaye amaFrentshi anika amabango abo kwi-Indochina yangaphambili i-Indochina nge-Geneva Agreement ka-1954.
Nangona kunjalo, amaMerika ayesaba ukuba uHo Chi Minh wayeza kwandisa iVietnam kwisibonda semakhomanisi, ngoko bangena kwimfazwe amaFrentshi ayeyishiyile. Emva kwamashumi emibini eyongezelelweyo yokulwa, iNorth vietnam Vietnam yahlula kwaye iVietnam yaba lizwe elizimeleyo lobukhomanisi. Uxolo lwaye lwaqonda iintlanga ezizimeleyo zaseCambodia kunye neLaos kwi-Asia-mpuma ye-Asia.
Iprofayili yelizwe: Malaysia Facts and History
Iindlela zoRhwebi lwamaLwandle eNdiya
I-East Timor (iTimor-Leste) | Iinkcukacha kunye neMbali
Isikhokelo Esikhawulezayo kwiMfazwe yaseVietnam
I-Indonesia-Imbali kunye neJografi
Kutheni i-US ingene iMfazwe yaseVietnam?
UBukumkani bukaBaekje wawuyintoni?
Imicimbi Yemidlalo Yezemidlalo okanye iMidlalo ye-Olimpiki yakudala
Impembelelo yeGear eGoli
Indlela yokumisela iKlasi lakho kwiSuku loQala lweSikolo
UHelen weTroy: Ubuso obuqalise iMikhumbi eyiwaka
I-University of Rowan GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Umyalezo othi "Thatha loo nto"